Naayijeeriyaan waliigaltee boba'aa malaammaltummaan gaggeefame irraa $bln6 dhabde - BBC News Afaan Oromoo
Naayijeeriyaan waliigaltee boba'aa malaammaltummaan gaggeefame irraa $bln6 dhabde
Goodayyaa suuraa Hojjettota boba'aa baasan
Manni Murtii Miilaan jiru himata malaammaltummaa Naayijeeriyaa doolara biiliyooba jaha dhabsiisuun kaampaanota lameen Enii fi Sheel irratti baname ilaalaa jira.
Gareen duula gaggeessu Global Witness jedhamu walii galteen OPL 245 bara 2011 keessa gaggeefame baajata eegumsa fayyaa fi barnootaa Naayijeeriyaa dachaan miidheera jedha.
Kaampaanonni Enii fi Sheel jedhaman gatii boba'aa Naayijeeriyaaf kaffalan matta'aaf akka oole beeku jedhamuun himatni irratti baname.
Kaampaaniin Xaaliyaan Enii fi Nezerlaandis himataman kunneen gochicha haalaniiru.
Himanni malaammaltummaa cimaan kun ofiseroota MI6 duraanii, FBI, pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fi hoggantoota kaampaanota lameenii ammaa dabalachuun Xaaliyaanitti ilaalamuu jalqabeera.
Ministeerri Boba'aa Naayijeeriyaa duraaniis Daan Etetee dadabarsa maallaqaa fi fandii biyyittiidhaan bidiruu saffisa guddaa qabdu fi qe'ee jireenyaa adda tahhe bitachuun Mana Murtii Faransaayiin himatamee balleessaa akka qabu murtaa'eera.
Goodayyaa suuraa Sheel dhaabbilee boba'aa malaammaltummaan himataman keessaa tokko
Global Witness waggootaaf waliigaltee kaampaanota lameen Eenii fi Sheel jedhaman akka boba'aa OPL 245 qarqara deeltaa Niigeerii baasan eeyyamuuf qorachaa tureera.
Akkasumas xiinxala haaraan haala kaamiin waliigalticha akka addaan citu gargaaru irrattis xiyyeefachuun hojjechiiseera.
Naayijeeriyaan erga pirojektichi eegalee kan bara 2011 duraan yoo wal bira qabamu $5.86bln dhabdeetti jedhe. Xiinxalli kun kan gaggeefame gatii boba'aa ammaa baarmeela tokkotti doolara 70 tahe fayyadamuuni.
"Malaammaltummaa irratti maatii koof hin araaramu"
Dhaabbanni duula gaggeessu kun walii galtichi addaan cituu qaba jechaa jiru. Waliigalteen Sheel Naayijeeriyaa bu'aa aragamu keessaa akka hin qooddanne kan baasedha jedhe duulicha kan gaggeessu tokko akka BBCtti himetti.
Maallaqni Naayijeeriyaan bu'aa waliigaltee OPL 245 keesssaaa bahuun dhabdu ammoo barsiisota miiliyoona jaha barsiisuu danda'a jedhe. Kun biyya adunyaa irraa uummata hiyyeessa qabduuf salphaa miti jedhe.
Naayijeeriyaan guddina dinagdeen Afrikaa irraa biyya soorettii jedhatus osoo gaazii fi boba'aa qabduu uumatni ishee miiliyoonotaan lakkaa'aman ammoo hiyyummaa keessa jiraatu.
Goodayyaa suuraa Warri duulicha gaggeessan waliigaltichi baajata barnootaa fi fayyaa dachaan miidheera jedhan
Waliigalteen OPL 245 kaampaanotni lamaan akka boba'aa baasaniif eeyyamu kun bakkichaa boba'aan baarmelli biiliyoona sagal akka argamu amanameeti.
Adeemsichi garuu malaammaltummaan kan laaqame ture. Ministirri boba'aa duraanii waliigaltee OPL 245 kaampaanii icciitiidhaan ofii hoggana jedhamu Maalabuu jedhamuuf kenneera.
Kana mijeessuuf ammoo pirezidaantii duraanii Gudlaak Jonataaniif matta'aa kaffaleera. Kaampaanotni Eni fi Sheel ammoo maallaqni doolara biiliyoona 1.1 tahu Naayijeeriyaaf kaffalan akka matta'aaf oole beeku jedhamuun himataman.
Kaampaanotni kunneen garuu nuyi dhimma kana hin beeknu maallaqni mootummaa Naayijeeriyaaf kaffalle mirga boba'aa baasuu argachuuf qofa jdhan.
Qorannoon Miilaanitti gaggeefamu kun milkaa'ee kan himatamtoota irratti balleessaa muru yoo tahe malaammaltoota hedduu irratti raafama guddaa uuma jedhameera.
Viidiyoo Jaakoob Zuumaa: Pirezidaantii Afriikaa Kibbaa gidirfamaa